नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : नेपाल पत्रकार मञ्चको भूमिकालाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय !
नेपाल पत्रकार मञ्चको भूमिकालाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय !
काठमाडौं । नेपाल पत्रकार मञ्चको दुई दिनसम्म चलेको बैठकले केही महत्वपूर्ण निर्णयहरु गर्दै मञ्चको भूमिकालाई अझ शसक्त र प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको एशोसियट शाखा समेत रहेको मञ्चले वरिष्ठ पत्रकार मदन श्रेष्ठ, योगेन्द्र प्रताव शाही र डा. सिर्जना थापालाई सल्लाहकारमा मनोनयन गरेको छ । मञ्चका अध्यक्ष युवराज विद्रोहीको अध्यक्षतामा लप्सीफेदीमा बसेको सो बैठकले अन्य समितिहरु समेत गठन गरेको छ । मञ्चका महाचिव विमल कुमार थापा संयोजक रहेको संगठन समिति गठन
गरेको छ भने कोषाध्यक्ष यज्ञबहादुर ढकाल संयोजक भएको आर्थिक व्यवस्थापन समिति गठन गरेको हो । त्यसै गरि सदस्य मनिषा अवस्थी संयोजक रहेको अतिक्ति क्रियाकलाप समिति गठन गरेको कुरा मञ्चका उपाध्यक्ष ललीतध्वज खड्काले पत्रकारहरुलाई जानकारी दिएका हुन । त्यसै गरी मञ्चका सदस्य सन्तेष बशिस्ट ( उदयनारायण भट्रटराइ संयाेजक भएकाे पत्रकार कल्याण काेष पनि गठन भएकाे खड्रकाले बताएका हुन ।
उनले पूर्वउपाध्यक्ष चन्द्रमणी भट्टराई संयोजक रहने गरि बैदेशिक समन्य समिति गठन गरेको छ भने मञ्चका सदस्य चुडादेव सिंहलामाको संयोजकत्वमा अनुसाशन समिति समेत गठन गरेको बताएका हुन । उनले बैठकले श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यन्वयनका गर्न सरकारसँग जोडदार माग गरेको समेत बताए ।